Drafitra 3D Wall
Inona ny ...
Araka ny fantatsika rehetra, ny marbra dia ...
Tombontsoa ho an'ny mar ...
Mihamaro ny olona misafidy ...
Ny fampiasana ny material space ...
Fantatsika rehetra fa vokatra marbra ny marbra. Betsaka ny fianakaviana mampiasa marbra amin'ny haingon-trano, ary ny marbra dia manana marbra voajanahary sy marbra faux. Tena mahazatra izy ireo. Ary na marbra artifisialy na marbra voajanahary dia samy manana ny tombony sy fatiantoka ananany. Fampidirana marbra artifisialy i ...
Mihamaro ny olona misafidy ny hampiasa countertop marbra noho ny fisehoany tsara tarehy sy ny endriny tena tsara. Voalohany, hamafin'ny haavony. Tsy mora ovaina. Ny marbra voajanahary dia mandalo taona maro vao miforona voajanahary. Ka homogeneous voajanahary amin'ny endriny. Ary ny fanitarana tsipika ...
Ny fampiasana fitaovan'ny habakabaka dia miteraka tsy tapaka ny vaovao, ary ireo fitaovam-pananganana isan-karazany dia niditra tsikelikely tamin'ny fahitanay. Ny hatsaran'ny marbra dia tsy nihena hatramin'ny andro taloha. Ny marbra ny rivo-piainana mendri-kaja dia mihaingo, toy ny zavakanto lasa natiora ihany, afaka mifangaro ao ...
avy amin'ny admin tamin'ny 19-09-24
Xiamen Morningstar Stone Co., LTD dia natsangana tamin'ny 23 Novambra 2017 ary voasoratra anarana any Xiamen, tanàna nosy tsara tarehy, izay mazàna amin'ny karazana marbra maoderina, granita, andry miendrika manokana, sns. Ary nahazo valiny tsara avy amin'ny mpanjifa maro .